Maxaad kala socotaa Ninka dunida ugu Afka weeyn & Ninkaan oo Daasado ama Gasacyaal Afka ka buuxsaday (Daawo Muuqaal+Warbixin) - iftineducation.com
Maxaad kala socotaa Ninka dunida ugu Afka weeyn & Ninkaan oo Daasado ama Gasacyaal Afka ka buuxsaday (Daawo Muuqaal+Warbixin)
aadan21 / July 5, 2012
iftineducation.com – Nin lagu magacaabo Domingo Joaquim Chiquinho oo u dhashay dalka Angola ayaa waxaa loo aqoonsaday in uu yahay shaqsiga Dunida ugu Afka weeyn. Ninkaan oo Iskoorka Afweeynida Caalamka jabiyay waxa uu si caadi ah Afka ugu guran karaa Daasado waa weeyn taas oo kuu cadeeneeyso weeyninka Afkiisa.
Guinness world Records oo aalaaba bixisa abaalmarinta Iskoorka Caalamiga ah ee Dunida waxeey Domingo Joaquim Chiquinho u aqoonsatay shaqsiga Dunida ugu Afka weeyn oo isaga oo Beniaadan ah hadane afka wax kasta ku guran kara.
Ninkaan reer Angola ayaa weeyninka Afkiisa waxa uu dhaqaalo kaga helay Telefishinada Caalamiga ah iyo Jaraaidyo kale kuwaas oo baahiyay Muuqaalkiisa Ninkaan waliba la yeeshay Wareeysiyo ay Lacago fara badan ka faaideen.
Al Shabaab Oo Sheegtay Inay Rajo weyn ka qabaan La Soo Wareegitaanka Michael Owen.
Ciyaartoyda Somalia u Mataleysa Olombikada